Madaxweynaha Ruushka oo si diirran u soo dhoweeyay dagaalyahan Khabib una hambalyeeyay
Mogadishu - 07:30:38
Wednesday October 10, 2018 - 23:30:01 in Wararka by Super Admin
Madaxweynaha waddanka Ruushka, Vladimir Putin ayaa casuumaad u fidiyay dagaalyahan Khabib Nurmagomedov iyo Aabihiis kaddib guushii weyneyd ee Khabib uu ka gaaray Conor McGregor oo u dhashay waddanka Ireland oo ay ku kulmeen tartanka Feerka iyo Laadka ee UFC.
Khabib ayaa si xarago leh uga badiyay McGregor, waxaana uu ku guuleystay suunka miisaanka fudud ee UFC.
Madaxweyne Putin ayaa xoogaa dhiirri gelin ah siiyay Khabib, isagoo ku tilmaamay dagaalyahan meel iska saaray McGregor, halka uu si gaar ahna ugu mahad celiyay Aabaha Khabib oo uu u sheegay in ay sharaf u tahay inuu soo koriyo wiilkan horyaalka ah.
Sheeko gaaban ayaa dhex martay Putin iyo Khabib aabihii, wuxuuna odaygu sheegay in Khabib markuu yaraa uu ahaa nin dhib badan, taasoo Putin-na uu ku jawaabay "hadduusan waagii hore dhib badnaan lahayn hadda guushan ma gaareen".
Putin wuxuu xusay in dadka Ruushku ay yihiin kuwo mideysan oo sida qoys ballaaran oo kale ah, wax walba oo dhacana ay tahay in laga fogaado deg degga in qofka lagu xukmiyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin.
"Dabcan haddii qof dibadda naga soo weeraro, kaddib dhammaanteen adiga qura ma ahane waan iska qabanaynaa, sidoo kalena waxaa dhici karta in ay cawaaqib xun la kulmaan" ayuu yiri Putin oo aakhirkii guul iyo inuu horey u sii wato ciyaarihiisa u rajeeyay Khabib.